ASP RSS Parser၊ Feed Reader | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 26, 2005 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
MSXML အရာဝတ္ထုကို သုံး၍ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် parser ကို ASP တွင်ရေးသားခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၇၅% သော RSS feeds ကိုဒီလိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် RSS feeds မှာပါတဲ့ XML သတ်မှတ်ချက်အချို့သည်ပရိုဂရမ်ရေးရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ သငျသညျအရေးယူအတွက်မြင်နိုင်ပါသည် ဒီမှာ။ သင်သည်အများဆုံးအရေအတွက် (ni)၊ စကားလုံး (nc) တွင်ပြတ်တောက်သောစာလုံးအရေအတွက်နှင့် URL အပါအဝင်လွန်နိုင်သောပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုသင်သွားနိုင်သည်။ သင်အမှန်တကယ် feed ကို debug variable နဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ် ဒီမှာ.
RSS feeds အတော်များများဟာတကယ့်ကိုညစ်ပတ်နေပြီး၊ XML ဖိုင်ထဲမှာစာသားကိုကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းကုဒ် (par) လိုအပ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွနု်ပ်တို့၏ RSS 'လူငယ်' တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်မအံ့သြပါ။ RSS သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်းပိုမိုဖတ်ပါ ဒီမှာ.
နောက်ဆုံးတော့ငါရတနာအနည်းငယ်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါအခမဲ့ download လုပ် ASP လူတန်းစားတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာနည်းနည်းနှေးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ဖတ်လို့မရတဲ့အစာကိုငါမတွေ့ဘူး။ ဒီမှာ static version နဲ့ dynamic version ရှိတယ်။
စုံတွဲတစ်တွဲဇာတ်ညွှန်းအပေါ်မှတ်စု။ ပြန်လာတဲ့ဖော်ပြချက်တွေမှာ HTML tags အချို့ကိုရှင်းထုတ်ဖို့လိုတယ်။ ငါအနည်းငယ်ရှင်းလင်းရေး function ကိုအတူငါပြု၏:
nPos1>2nPos1 = InStr (nPos1 + 0, strText, ">") ဖြစ်ပါက nPos2> 1 nPos1 = InStr (nPos2 + 0, strText, ">") ကိုလုပ်ပါ။ nPos1 = InStr (strText, ">") LoP RemoveHTML = strText အဆုံးရာထူး - - 1) & Mid (strText, nPos2 + 1) ကျန်အထွက်ကုန်အဆုံးသတ်ပါ
နောက်ထပ်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကုဒ်ထပ်ထပ်ထည့်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်ဖော်ပြချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် နည်း၍ ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စာလုံးအရေအတွက်ကိုသာကန့်သတ်ထားလျှင်၊ စာလုံး၏အလယ်တွင်ဖော်ပြချက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သည်။ ငါမလုပ်ချင်ဘူး
Cutoff (strText, intChars) dim intLength dim j intLength = len (strText) အကယ်၍ intChars> intLength လျှင် j = intChars အတွက်0step -1 သို့ရောက်လျှင်အလယ်အလတ် (strText, j, 1) = "" ထို့နောက် j> လာလျှင်နောက်သို့သွားပါ။0ထို့နောက် strText = left (strText, j-1) & "... " အခြား strText = strText အဆုံးသတ်လျှင် Cutoff = strText အဆုံးရာထူး
(ကျွန်ုပ်ဒီ Code တွင်ကျွန်ုပ်၏ကုဒ်ကိုမှန်ကန်စွာပြသရန်အချို့သောပြသနာများရှိခဲ့သည်။ သင့်တွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုနှင့်ပြသနာရှိပါသလား။ )
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် RSS သတ်မှတ်ချက်များကိုဆက်လက်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးဖြစ်ရပ်မှန်အားလုံးသည် XML စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ TypePad, WordPress စသည့်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်များသည်သူတို့၏ RSS လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်။ MySpace, Xanga, LiveJournal စသည့်ဘလော့ဂ်များသည်သူတို့၏ RSS လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေရန်လိုအပ်သည်။ RSS သည်အစွမ်းထက်သည်။ခရစ် Baggott Email vs. RSS တွင်ကောင်းမွန်သောအပိုင်းအစတစ်ခုကိုရေးသားခဲ့သည်။ ငါသူတို့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးနှစ် ဦး စလုံး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ထင်!
Tags: ASPparserRSS ကိုrss parser
သင့် Blog တွင် Code အတွက် CSS Style